Umhla My Pet » 5 Izizathu Kutheni Breakfast First Imihla Ingaba Lokukulu
ukubuyekezwa: Jan. 12 2021 | 2 min ukufunda
Bona ingcinezelo eliphantsi:
NeNtlanganiso kusasa kuthetha ukuba salindela ukuba "ubunzulu" ngomhla kunokuba kuba ncinci kangangoko kunokwenzeka omabini amacala. Akanakufane nokuba uya ndingazivi litenxile okanye ukuzithemba bayaphila mpo, yokutyela sakusasa-zijolise, njengoko kanye kumsitho sakusasa yenye ethe bebefudula elisezantsi iqhosha mayimncede. nokuba, Ngokungafaniyo yokuhlangana nje ikofu, imihla sakusasa ngokungagqibekanga kukunika eyakhelwe-ngaphakathi kakhulu amathuba okufumana ukwazi engathandekiyo eyomnye umntu. Ukusuka nokufunda nokuba bayathanda isosi kwi amaqanda abo ukuba baziva njani na makhekhe vs waffles, imihla sakusasa kubonelela "yiya-ukuba" izihloko incoko xa namnye kuni unako ukucinga oko kukuthi.
Akukho ukulindela into eyenzekayo emva
Nokuba nto bezibuza ukuba kuya kubakho isimemo sokuya kwigumbi umhla wakho okanye ubusuku ngaphandle kuphengulula kwidolophu kunye, imihla isidlo soloko ilandelwa kukho ukungaqiniseki malunga nendlela / kanye ebusuku baya kuphela xa. Kunye nemihla sakusasa, kwelinye icala, ixesha lesiphelo uqale ngokulula phambi ezicwangciswe. Inyaniso, lingakufaka yinxalenye wokumiswa kwexesha lokuqala umhla. Njengokuba, ebonisa umhla isidlo 9am kwakhona sikhatshwe nje, "Ndiye ndafumana umdlalo igalufa ezicwangciselwe 11;" Le ndlela, nobabini wena umhla yakho kwi-the-yazini malunga mhla uya kuthatha ixesha elingakanani. Ukongezelela, exubusha ngamnye izicwangciso zakho nabanye imini kunokuba enye lula "yiya-ukuba 'isihloko incoko xa chomp phantsi imiqhathane kunye namanqatha.
Baya kuba lula-ukuya-nani-phandle ikhowudi isinxibo
Ukukhetha impahla kuba ngomhla wokuqala kunokuba kakhulu ngaphezulu luvo-wracking akhethe izinto ukusuka ngubo lakho kufuna umsebenzi. na ukubona ebalulekileyo ngokungathandabuzekiyo, kodwa kungona befunda indlela dressy okanye ongathandani kufuneka kuba ndithandana uluvo lokuqala idla unobangela uxinezeleko ezingafunekiyo onke amaqela abandakanyekayo. kunye sakusasa, nokuba, sinxiba ngokubanzi phantse ngokuqinisekileyo ngaphandle umbuzo. Nangona sokuzibonakalisa ukubila kunye t-shirt ayisiyiyo Licebo nokuba, imihla sakusasa ngxi ngokungagqibekanga xa eyalela umntu okhululekileyo, nomntu ongathandani (kodwa bukwavelise) indlela yokunxiba.
Ngokungafaniyo umhla isidlo apho iBhili kusuka Appetizers ukuba neziselo entrees ukuba izimuncumuncu, imihla sakusasa uphantse ziqinisekisiwe ukuba mhle ezifikelelekayo noko kwiindawo ezininzi. qiniseka, add-ons ukuya uyilwayo inokuquka odola yekofu okanye orange juice okanye esakhetha icala yeziqhamo isaladi endaweni abebala asa, kodwa ngokubanzi, imihla sakusasa mahle lula ukuqikelela ixabiso. Le bonus kabini wena nomhla lwakho: Akuyi kuhamba bazimpula ngomhla ezinokuba embi kuqala, kwaye / akayi kuziva ikhohlakeleyo ngawe echitha isixa ixhayi kumkhawulela / yakhe.
Bona into ziintshatsheli ntoni ...
Kulungile, ngoko lo mntu abe isuntswana twe, kodwa uphando lubonisa ukuba ukutya isidlo sakusasa esinempilo phezu isihlandlo rhoqo inxulunyaniswa impilo engcono ngokubanzi kwaye banamathuba ukuba bakwazi ukufikelela usukelo ilahleko ubunzima. Inyaniso, omnye "iincam ilungileyo" xa usa qalisa uhambo yimpumelelo ilahleko ubunzima ukuba nidle isidlo sakusasa yonke imihla. Oku kungenxa yokuba ukutya isidlo yindlela emnandi ukuqala usuku kuphela, kodwa kwakhona yindlela obalaseleyo ukuqalisa ukutya kwakho ngaphandle imo yalo ngokuzila zasebusuku. Ngamafutshane, imema umhla wakho sakusasa yindlela kakhulu kuthi, "Hey, Mna umntu okukhathaleleyo ngempilo yam, kwaye mna nje ukuze undikhathalele nobakho!"
Indlela yokuba Umhla Amazing First